Ndị ọrụ Kaiser ga-eme ihe echi n'elekere asaa nke ụtụtụ: 7 siri ike
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Ndị ọrụ Kaiser ga-eme ihe echi n'elekere asaa nke ụtụtụ: 7 siri ike
Ihe karịrị ndị ọrụ 40,000 sitere na SEIU-UHW, OPEIU Local 29, na IFPTE Local 20 dị njikere ịpụ na nkwado nke ndị injinia, na-eme ka ọ bụrụ ọrụ ọmịiko kacha ukwuu na mba ahụ, na-achọ ka Kaiser kwụsị mmegbu akụ na ụba ya wee kwenye na a. nkwekọrịta ziri ezi na ndị injinia na-arụ ọrụ na mpaghara 39.
Ndị ọrụ ga-apụ n'ọrụ ahụ wee banye n'ahịrị iku echi na elekere asaa nke ụtụtụ, Tọzdee, Nọvemba 7, na Kaiser Permanente Medical Center na San Jose na ụlọ ọrụ dị iche iche n'ofe Northern California.
N'izu gara aga, ndị ọrụ ahụike na-anọchite anya ndị otu SEIU-UHW's 36,000 Kaiser Permanente na Northern California tozuru oke site na 97% iji nye ikike iwere ọmịiko otu ụbọchị n'ịdị n'otu na ndị injinia Kaiser sitere na Mpaghara 39 bụ ndị na-arụ ọrụ ọnwa abụọ.
Ọrụ ndị votu a metụtara gụnyere ndị na-ahụ maka anya, ndị ọkà mmụta sayensị ụlọ nyocha ụlọ ọgwụ, ndị na-ahụ maka iku ume na x-ray, ndị nọọsụ nwere ikike ikike, ndị nọọsụ nyere ikike, ndị na-ahụ maka ịwa ahụ, ndị na-ahụ maka ọgwụ, phlebotomists, ndị enyemaka ahụike, na ndị na-elekọta ụlọ, n'etiti ọtụtụ narị ọkwa ndị ọzọ.
N'agbanyeghị na ọ bụ ọgbakọ anaghị akwụ ụgwọ - nke pụtara na ọ naghị akwụ ụtụ isi maka ego ọ na-enweta na ụtụ ụlọ nwere oke - Kaiser Permanente kọrọ ego ruru ijeri $6.4 na 2020.
Ndị ọrụ ahụike yi uwe ha ga-aga n'ahịrị iku, ga-eme njem, kwuo okwu, kesara ndị na-agafe agafe mpempe akwụkwọ, jide akara na ịfụ ụta iji kwado ndị injinia Kaiser si Mpaghara 39.
Echi 7 nke ụtụtụ, Tọzdee, Nọvemba 18
Mmetụta ọmịiko ga-emekwa n'ebe ndị a malite n'elekere asaa nke ụtụtụ na Nọvemba 7:
• Obodo REDWOOD: Kaiser Permanente Redwood City Medical Center, 1150 Veterans Blvd, Redwood City, CA 94063